SomaliTalk.com » Sideen u Fahamnaa Quraanka? Q: 19aad
1- In ay Cadeyso Weynida Alle (Cw) iyo Awooda uu u leeyahay Nooleynta iyo Dilitaankaba.
2- In ay Xujooyin iyo Cadeymo Cadcad u keento Alle (Cw) Kali ahaanshihiisa.
3- Waxey Suuradan Cadeysaa Ciribta xun ee ay la Kulmaan kuwa Inkira isoo soo Nooleynta (isi soo Bixinta) Maalinta Qimaaha.
Suuradaan Guud ahaan waxaa isku Tilmaamaay Allaah inuu Weyn yahay wax la mida ah ma la awoodana aysan jiray, Allaah ayaa Naftiisa ku amaanay xaq ayuuna u leeyahay wayo kan Abuuray Cirka aad Dilaaca laheyn iyo Dhulka Taagan ee Biyaha iyo Buurahaba Awoodiisa ku Uumay, sidaa darted Abuurka allaah ha ahaado dad, malaaig ama Jiniba uma banaana in ay weyni iyo Awood iyo Amaanba naftooda ku Sheegaan darajo kasta ay gaaraan.
Suuradan waxaa loogu Magac Daray Al-Qalam madaama ay ku Bilaabato Inuu Alle ku Dhaartay Qalinka oo ah Qalabka wax lagu Qoro laguma Qoray gaar ahaan Qadarka oo dhan.
1- Risaalada nabi Muxamad iyo Shubhaadka ay kala Hor yimaadeen Gaaladii Qureysh Dacwadii Nabi Muxamad (Scw).
2- Qisadii kuwii Beerta lahaa ee ku Tashaday inaysan Dad waxba ka siin oo aysan wax Sadaqa ah ka Bixin Beertooxda una kalahay inta aysan Masaakkiinta toosin ayagoo is leh dhaqsaba intuusan waaga wada dilaacin kala keydsada, aygoo iloobay inuu Allaah Nicmada ay heleen ku siiyay inuu ku Imtixaano si loo eego in ay Xaqii lagu lagaa Bixinayaan iyo in ay ku Kibrayaan, waxaana ay u tageen beertoodii oo Muuqaalkeedii badalmay, Abuurkiina baaba’ay, .. Qisadaana waxey daliil u tahay Abaal marka ku Dhaca kuwa Nimcada Alle (Cw) ku Kufriya ee ka Bakhiila Maalka uu Allaah siiyay inay Xuquuqda Masaakiinta ka gutaan.
3- Maalinta Aakhiro iyo Dhibaatooyinka ka jira, waxayna Suuradan Cadeysay Dadku in akala Noqon Doonaan lab Koox tan Hore waa Muslimiin oo Janada gali Doona iyo Mujrimiin Naarta la galein Doono.
Waxaana Xasuusin mudan in waayahan ay bateen Dad Aflagaado iyo Xumaan la beegsada Diinka Islaamka Guud ahaan Gaar ahaan Quraanka Kariimka ah iyo Nabigeena Suuban ayadoo ay taasna ka dhalatay Qoraalo Cadaalad daro ku dhisan oo la qoaray qarniyadii Dhexe xiliyadii ay jireen dagaaladii waa weynaa ee saliibiyiinta iyo Muslimiinta u dhaxeeyay waxaana Maanta soo Cusbooneysiiyay Aflagaadadaas kuwa Dhaxal ahaan u helay Xiqdigii ay ka Dhaxleen Awoowayaashood ayagoo ka Dhigaya wax Cusub ama Maanta Biloowday.
Waxaa taariikhda ku cad Aflagaadada Quraanka iyo Nabiga waxay soo jirtay laga soo Bilaabo waagii Nabiga Suuban la soo saaray waxayna sii korortay xilayadii qarniyada dhex waxna uma dhimin mana u dhumi doonto mana aha huru mar iyo Ilbaxnimo ama Xoriyatul Qowl aflagaadada Diinta Islaamka laakiin waa in Aduunkan awalba la haleeyay dabkana ka hursan yahay banziin lagusii shubo dhibaatadana lasii kordhiyo.
hadii ay Qolo Maanta u istaagto dayaxa ama Qoraxda in ay Aflagaadeeyaan si Iftiinkooda loo waayo suura gal ma ahan in Qoaraxda iyo dayaxa Iftiin beelaan dacaayad darteed sidaasoo kalana suuragal ma aha in aflagaado Iftiinka iyo Nuurka Islaamka lagu damiyo horaana looga dalay laakiin dad badan ayaa ku Aduun iyo Aakhiro seegi doona!